BigCommerce dia mandefa ny sehatra Ecommerce Enterprise | Martech Zone
BigCommerce dia mandefa ny sehatra Ecommerce Enterprise
Alarobia, Septambra 2, 2015 Talata, May 2, 2017 Douglas Karr
BigCommerce dia nanomboka BigCommerce Enterprise, sehatra e-varotra matanjaka kokoa manolotra ho an'ireo mpivarotra ambongadiny avo lenta mivarotra dolara an-tapitrisany. BigCommerce Enterprise dia misy fiarovana sy fiarovana mandroso, amin'ny fotoana tena izy Analytics ary ny fomba fijery sy ny fampidirana ambaratonga orinasa ahafahan'ny mpivarotra an-tserasera mitantana sy mampivoatra ny orinasany raha tsy manahirana ny vahaolana arak'asa, ny vahaolana eo an-toerana na ny loharanon-karena IT lafo vidy. Navoak'ilay orinasa ny sehatra hisafidianana mpanjifa tamin'ny taon-dasa ary ankehitriny dia manambara ny fisian'ny ankapobeny.
Marika lehibe mampiasa BigCommerce Enterprise dia misy Samsung, Gibson, Marvel, Cetaphil, Schwinn, Pergo, Enfamil ary Ubisoft. Ireo mpanjifa vao nosoniavina dia ahitana ny Austin Bazaar Music, Brinks, tavoahangy tavoahangy, Apothecary marobe, Dallas Golf, komandy gana, Tato Flash, heloka bevava sokay, angano, NRG ary fivarotam-panafody Overstock.
Hatramin'ny nifindrana tany BigCommerce, haingana kokoa ny tranonkalantsika ankehitriny, tsara kokoa ny traikefan'ny mpampiasa, ary nahatratra laharana fikarohana avo kokoa izahay. Nampitomboinay ny varotra an-tserasera 47% ary isehoanay izao ny laharana voalohany amin'ny lisitra biolojika ao amin'ny Google. Paul Yoo, Filoha & COO ao amin'ny US Patriot
Ao anatin'ny famotsorana, ny mpanjifa BigCommerce Enterprise dia manana fidirana amin'ny fahaiza-manao vaovao sy nohatsaraina natao hanohanana ny fahombiazan'ny asa, ny fahafaha-manao ary ny fahamendrehana an'ireo orinasa vao misondrotra.
Real-time, Analytics ho an'ny mpanjifa - Varotra e-varotra amin'ny fotoana tena vaovao Analytics dashboard ahafahan'ny mpanjifa mamerina ny vola very very amin'ny alàlan'ny fanombanana ny fitondran-tena amin'ny fividianana mpanjifa, manatsara ny lisitra sy ny varotra ary manombatombana ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ary miverina amin'ny fampiasam-bola isaky ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy.
Masinina fanatsarana ny BigCommerce Insights - Votoatiny feno sy angon-drakitra azo ampiharina, azo sambany amina sehatra e-varotra ambaratonga orinasa, miaraka amin'ny fahafaha-manao tatitra manadihady mba hanampiana ireo mpivarotra hamerina ny mpanjifa sy ireo programa momba ny tsy fivadihana solika amin'ny alàlan'ny famaritana ny sarany avo sy atahorana. mpanjifa, ento ny fividianana miverimberina amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fantsom-pividianana, fantaro ireo vokatra tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny tahan'ny fifanakalozan-kevitra mandeha ho azy sy ny fandinihana ny fifamoivoizana ary ny fidiram-bola mitombo amin'ny alàlan'ny tolo-kevitra momba ny fivarotana
Fampiroboroboana ny Enterprise-grade - Ny mpivarotra dia afaka manitatra ny fahaizan'ny magazay amin'ny alàlan'ny fampidirana ambaratonga an-jatony. Ny mpanjifa orinasa dia mahazo fidirana tsy misy fetra amin'ireo fidirana feno ao amin'ny BigCommerce izay misy ny endri-javatra sy ny fiasa rehetra - manomboka amin'ny fandrindrana loharanom-pahalalana ho an'ny orinasa sy ny fitantanana ny lisitra ka hatrany amin'ny marketing kaonty sy mailaka - ilaina hitantanana fivarotana an-tserasera an-tapitrisany dolara.
Security sy fiarovana mandroso - Nahazo fidirana amin'ireo endri-piarovana mahery vaika toy ny SSL anatiny, PCI Compliance, ary fiarovana DDOS ny mpivarotra orinasa mba hiantohana ny tranokala hiasa ary hahafahan'ny mpanjifa mifampiraharaha am-pahatokisana. BigCommerce koa dia manasongadina HTTPS manerana ny tranokala mba hampitomboana ny laharan'ny Google-Search ankoatry ny fampitomboana ny fahatokisan'ny mpivarotra.
Fampivoarana tsara ho an'ny fivarotana - Ny fotodrafitrasa BigCommerce dia manambatra tambajotran'ireo ivon-tahiry manerantany mba hiantohana ny fotoana lanin'ny pejy mavesatra indrindra sy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo mpitsidika sy mpividy tranonkala manerana ny jeografia rehetra. Ny mpanjifa orinasa dia mahazo tombony amin'ny fanaraha-maso tranokala 24/7 sy ny fanohanana laharam-pahamehana miaraka amin'ny serivisy serivisy 99.9% azo antoka SLA.
Tags: Austin Bazaar MusicBigCommerceorinasa lehibeMpanapaka tavoahangyBrinksApothecary marobeCetaphilDallas GolfDuck Commanderfamilyecommerce orinasaTattoos FlashGibsonanganoCrime sokayMarvelNRGFivarotam-panafody OverstockPergoSamsungSchwinnUbisoft
Marketing amin'ny marketing amin'ny atiny mandaitra mahomby amin'ny mpanjifa